सुशासनको अभावमा अलमलिएको विकास – Chitwan Post
सुशासनको अभावमा अलमलिएको विकास
प्रकाशित मिति: बिहिबार, असार १८, २०७७
विकास र प्रक्रियामा अन्तरनिहित विविध पक्षका जानकार नेतृत्व भएमा विकासमा अलमल हुँदैन । उसलाई कसैले बहकाउन पनि सक्दैन । विषय विज्ञहरुको सहयोगमा नेतृत्वले विकासका प्राथमिकता सजिलै निर्धारण गर्न सक्छ । ती प्राथमिकताअन्तर्गत सञ्चालन गर्नुपर्ने विकास आयोजना र कार्यक्रम पहिचान गर्न पनि कठिनाइ हुँदैन । कार्यान्वयनकोे निमित्त आवश्यक हुने वित्तीय साधन र जनशक्तिको संरक्षण सहज ढङ्गले हुन सक्छ । उपलब्ध वित्तीय साधनको सदुपयोग गरी निर्धारित समयभित्रै आयोजना तथा कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने परम्परा बसालिएकोले चीनमा वित्तीय साधन अभावको चर्चा सुन्न परेन । त्यही भएकाले ४० वर्षमा चीन अमेरिकाले ईष्र्या गर्नुपर्ने विकासको उचाइमा पुग्यो । तर, वित्तीय उपलब्ध साधन पनि खर्च गर्न नसक्ने एउटा आयोजना सुरू भएको बिसौँ वर्षसम्म पनि सम्पन्न गर्न नसक्ने मन्त्रीहरु काममा भन्दा शिलान्यासमा बढी रूचि देखाउने र शिलान्यास गरिएका आयोजनातर्फ फर्केर पनि नहेर्ने प्रचलन छ ।
विकासका आधार पुँजी र युवाशक्तिको निरन्तर विदेश पलायनप्रति इमानदारितापूर्वक चिन्ता र चासो नदेखाउनेले गरेका विकासका ठूला कुरालाई आमनागरिकले कसरी पत्याउने ? सपनामात्रै देखेर काम छैन, सपनालाई कार्ययोजनामा रुपान्तरण गर्दै विकासको गतिलाई तीव्रता दिनुपर्ने आवश्यकता छ । योजना बनाउने, बीचमै रोक्ने र फेरि भत्काएर अर्को योजनामा लाग्ने जिम्मेवार भनाउँदा निकायहरुले आपसमा आरोप–प्रत्यारोप गरेरै समय बिताउने रोगबाट नेपाल मुक्त हुन सकेको छैन । दीर्घकालीन योजनासहित सरकारी निकायहरुले समन्वय र आवश्यक तालमेल गरेर अघि बढ्नुपर्छ । विकासको कार्यशैलीमा व्यापक सुधार गर्न अनुगमन, सुपरिवेक्षण, अनुसन्धान, मूल्याङ्कन, दण्ड र पुरस्कारलाई पद्धतिकै रुपमा कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।
विकास प्रक्रिया बुझेका राजनीतिक कार्य दुनियाँमा कमै भेटिन्छन्, चाहेर पनि सबै नेता लि कवान र महाथीर मोहम्मद बन्न सक्दैनन् । उनीहरुमा ज्ञानका साथै विकास गर्ने प्रतिबद्धता पनि थियो । त्यही भएर विकासको परिणाम देखाएर नै लिले तीन दशकभन्दा बढी समयसम्म मलेसियामा लगातार चुनाव जितेका थिए । मुख्यरुपमा विकास परिणामकै कारणले चीनमा यति लामो समयसम्म शान्ति छाइरहेको छ र विकासमा अगाडि बढ्न थप ऊर्जा प्राप्त भइरहेको छ । यस्ता उदाहरण अन्यत्र पनि भेटिन्छन् ।
यसपटक नेपालले त्यस्तो अवसर पाएको थियो । देशको नेतृत्व विकासमा केन्द्रित हुने हो भने विकासलाई न कुनै अवरोधले छेक्छ न त्यसमा ढिलाइ नै हुन्छ । किनभने, ध्यान केन्द्रित गर्ने र प्रतिबद्धता हुने हो भने स्थिर सरकारले समाधान गर्न नसक्ने विकाससम्बन्धी कुनै समस्या हुँदैनन् । काम गर्नेलाई भन्दा मन पर्नेलाई कामको जिम्मा दिने अभ्यासबाटै विकास मूल एजेन्डामा छैन भन्ने बुझिन्छ । काम हुन नसकेपछि यहाँ त कामबाट होइन वाणीबाटै विकासलाई स्थापित गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।
राजनीतिक विवाद र अस्थिरता तथा अशान्तिले मात्र विकास प्रक्रियालाई अघि बढ्न दिँदैन । यो विकास अर्थशास्त्रको सामान्य मान्यता हो । तर, नेपालले त्यो चरण पार गरिसकेको छ । देशमा शान्ति छाएको छ, राजनीतिक विवादको अन्त्य भएको छ र स्थिर सरकार पनि छ, तर यी सबै कुरा हुँदा पनि दिगो विकासले गति लिन नसक्नु दुःखद छ । कृषि, उद्योगजस्ता उत्पादनशील क्षेत्रमा हामीले अझै पनि भुइँ छाड्न सकेका छैनौँ । परनिर्भरता बढ्दै गएको छ ।
यस्तो अनुकूल समयमा पनि सिमेन्ट र फलामे डन्डीजस्ता निर्माण सामग्रीको खपत यो वर्ष आधा घटेको कुरा स्वयं यी सामग्रीका उत्पादक बताइरहेका छन् । कृषि उद्योग तथा निर्यातजस्ता रोजगार आय र आयात प्रतिस्थापना गर्ने आधार मूल क्षेत्रमा न कुनै नयाँ रणनीति र आयोजना आए न कार्यान्वयनका क्षेत्रमा कुनै ब्रेक थ्रु नै हुन सक्यो । विकासका लागि यस्तो सुनौलो अवसर रहेको बेलामा मह¤वपूर्ण निर्माण सामग्रीको खपत घट्नु, बैंकको कर्जा प्रवाह घट्नु, विकास खर्च नबढ्नु र राजस्व परिचालनमा शिथिलता आउनु विकासको दृष्टिले शुभ संकेत होइन, जसले समग्र अर्थतन्त्रको संकुचनलाई इंगित गर्छ । यसले बेरोजगारी बढाउँछ र पुँजी पलायनलाई बल पु¥याउँछ ।
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामीले विकास विस्तार गरेको त हो, तर सँगसँगै गुणस्तर गम्भीर मात्रामा खस्केको हुँदा अराजकता बढेको बढ्यै छ । यथार्थमा यी दुवै क्षेत्र अस्तव्यस्त अवस्थामा छन् । त्यसमा सुधार ल्याउने कुरामा कुनै नयाँ पहल भइरहेको देखिँदैन । वैदेशिक व्यापार कहालीलाग्दो अवस्थामा पुगेको छ । त्यसमा सुधार ल्याउनु आवश्यक छ, तर त्यसमा पनि ठोस र प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सकिएको छैन । बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा पनि निश्चितरुपमा विस्तार भएकै हो, तर त्यसले उत्पादन र रोजगारी बढाउन सहयोग पु¥याएको छैन ।
वैदेशिक रोजगारको ढोका मात्र नखुलेको भए हाम्रो अर्थतन्त्रको हालत कस्तो हुनेथियो भन्ने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । विगत दुई वर्षदेखि राजनीतिक वातावरण यति अनुकूल रहँदा पनि यी कुनै पनि क्षेत्रमा विकासको नयाँ पहल हुन सकेको छैन । पुरानै प्रवृत्ति, शैली नीति, आयोजना र कार्यक्रम बाँडेर समृद्धिको कुरा गरिरहेका छौँ । हामी विकासको बाटोमा थुप्रिएका विकृति र विसंगतिमै लटपिएर बसेका छौँ । तिनलाई चिरेर, भत्काएर नयाँ शैलीमा अगाडि बढ्ने प्रयास भएकै छैन ।
देशमा उपलब्ध सबै किसिमका साधनहरुको पूर्ण परिचालन र सदुपायोग नगरी विकासजस्तो जटिल र चुनौतीपूर्ण लक्ष्य हासिल भएको उदाहरण कतै भेटिँदैन । जनतालाई लगानी गर्न, मेहनत गर्न र कमाउन उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । त्यसमा बाधकका रुपमा रहेका ऐन कानुन र नीति नियमलाई लगानीमैत्री हुने गरी सुधार र संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो नेतृत्वमा उदारता भएमात्रै तयार हुन सक्छ । नेपालमा यही किसिमको अभाव देखिएको छ । साथै, कसबाट कामको सबैभन्दा राम्रो परिणाम आउन सक्छ भन्ने आधारमा मात्र जिम्मेवारी दिनुपर्ने हुन्छ ।
विकासका निमित्त सबैभन्दा मह¤वपूर्ण र अपरिहार्य कुरा सुशासन हो । सुशासन भएका मुलुकमा विधिको शासन, भ्रष्टाचाररहित शासन संयन्त्र, पर्याप्त जिम्मेवारी बोध भएका राजनीतिकर्मी र कर्मचारीतन्त्र रहेको पाइन्छ । नेपालमा सुशासनबारेमा जति चर्चा हुन्छ व्यवहारमा त्यसको ठीकविपरीत छ । नेपालमा भएको अवस्था त सुशासन शब्दको अपमान हुने खालको छ । त्यसैले, यो तथ्यबाट नेपालमा यतिखेर पनि विकास राज्यको मूल एजेन्डामा परेको छैन भन्ने प्रमाणित हुन्छ ।
सरकार नेतृत्वको वैधानिकता
राजनीति धमिलिने सङ्केत
जीवन सार्थकताको रहस्य (लक्ष्मणरेखा)
प्राकृतिक स्रोतसाधनमा आदिवासी जनजातिको पहुँच र अधिकार
सामाजिक रुपान्तरणको मुद्दा र हामी
आफ्नो क्षमता पहिचान गर्नुहोस् !
साम्यवादको मर्म : जातवाद कि मानवतावाद ?
प्रतिरक्षा प्रणाली नै निर्विकल्प